Maxaa loo daliishadey xugunka rajmiga? 1 – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Abdalla M Aw-Hasan • Qorraalo
Culimida masaladan qabta waxay daliishadaan 3arin oo kala ah aayad la nasakhay, axaadiis iyo aqwaasha culimada, waana arin ku tusaysa inay culimadu rumaysan yihiin inaan qofka guurka soo maray xugunkiisa lagaga hadlin quraanka marka laga reebo aayadda la nasakhay, taasoo muujinaysa inay culimadu ku camal faleen adillo kala dhiman maxaa yeelay xugankan waa lagu caddeeyey quraanka sida aan u tegi doonno, sidaa darteed 3arin ee ay wax ku dhiseen sadexdaba waa la bushin karaa (radin karaa).
Marka 1aad hadi aayad la nasakho waxaa shardiya in aayad kale lagu bedelo sida ku cad aayadda 106 ee suuradda al-baqara iyo aayadda 101 al-naxli, sidaa darteed hadi ayna culimadu keenin aayaddii lagu nasakhay waxay noqon laba mid uun: 1: inayna jirin wax aayad ah oo la naskhay, 2: in lagu nasakhay aayadda 2aad suuradda al-nuur ee tilmaamaysa jeedalka, taasoo keenaysa inay isku xugun noqdaan qofkii guur soo maray iyo kii aan soo marin.
Midda 2aad markii axaadiista la daliishanayo waxaa shardiya 3arin oo kala ah sanadka oo xasan (dadka weriyey), cillad xagga macnaha ah inayna jirin iyo inayna jirin adiillo ka hor imanaysa, hadi shardiga 1aad la helo labada kale way adagtahay in axaadiistaasi buuxiso, taasoo ka dhigan in xugunka rajmigu noqdo mid aan sugnayn.
Hadaan ku horrayno cilladda xagga macnaha ah axaadiistaasi waxay noqonaysaa mid nasakhan hadi ay ka horraysey waqtiga aayadda la nasakhay sidaa darteed qofkii axaadiistaas daliishada waxaa laga rabaa inuu caddeeyo waqtiga aayadda la nasakhay iyo waqtiga axaadiistaas la weriyey midka horreeyey.
Sidoo kale waxaa jira adillo ka hor imanaysa xugunka rajmiga, sidaa darteed adilada loo daliishadey rajmiga sida axaadiista iyo ijmaaca culimada ma aha adillo madaxbaan, waxaa kale oo jirta adillo caddaysay xugunka qofka guurka soo maray, culimaduna waxay inta badan kutubaha xuduuda kaga hadlaan adilada rajmiga ku saabsan oo keliya, taasoo caddayn u ah inay ku camal faleen adillo kala dhiman, waana midda keentay in laga daba tago xunka ay rideen.
La soco qaybaha danbe.
MAXAY U FASHILMEEN URUR DIIMEEDYADA SIYAASADEED? [BAADIGOOB XAQIIQ] (QEYBTII 5AAD)